Posted by dipakt on अक्टूबर 24, 2009
नेपाली चलचित्र र मोडलिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा र्सवाधिक चर्चामा रहेकी नायिका नम्रता श्रेष्ठको अश्लिल भिडियो टेप र्सार्वजनिक भएपछि उनी तनावमा परेकी छिन् । हाल पर््रदर्शनमा रहेको सानो संसार चलचित्रकी नायिका समेत रहेकी नम्रता र डिजे तान्त्रिकबीचको यौन सम्बन्धको भिडियो टेप यु ट्युव र मोबाइलहरुमा र्सार्वजनिक भएपछि उनी तनावमा परेकी हुन् । नायिका नम्रता र डिस्को जकी तान्त्रिकबीच केही समयअघि भएको यौन सम्बन्धको मिडियो उनीहरु दुवैले सहमतिमै खिचेको बताइएको छ । तर सो भिडियो तान्त्रिककी श्रीमतीले फेला पारेपछि घरझगडा परेको र उनले नम्रता र आफ्ना श्रीमानलाई माइती नेपालमा उभ्याएर आइन्दा त्यस्तो सम्बन्ध नराख्ने सहमति गराएको स्रोतले जनाएको छ । यु ट्युबबाट र्सार्वजनिक भएको नम्रताको अश्लिल भिडियोमा उनीहरुबीचको यौन सम्बन्धका करीब २० मिनेटको दृष्य राखिएकोमा शुक्रवारदेखि यु ट्युवले सो दृष्य हटाएको छ । यसैबीच नायिक नम्रता श्रेष्ठले भनें आफूलाई बद्नाम गर्न सो भिडियो टेप र्सार्वजनिक गरिएको आरोप लगाएकी छिन् ।
Posted by dipakt on अक्टूबर 23, 2009
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले बडो भावनात्मकपूर्वक यो प्रश्न गर्नुभएको थियो तथा बडो प्रतीकात्मकपूर्वक यो प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो । भौगोलिक रूपमा समेत चीन र भारत जस्ता विशाल राष्ट्रको बीचमा भएको हुँदा मात्र यो देश सानो देखिएको र भनिएको हो । सानो भए पनि यो देश सानो छैन तर दुर्भाग्यवश लघुताभाषका कारकहरूका कारकतìवहरू भने हामीमै छन् । राणाकालमा मूलतः यो देश एउटा जातिको पेवा भयो । २०१७ सालपछि एउटा राजाको भयो । ”हाम्रो राजा हाम्रो देश” भन्ने नारामा समेत देशभन्दा राजा अगाडि रह्यो । शाहीकालमा समेत जुन राष्ट्रवादलाई मिलनबिन्दु बनाउने प्रयास गरियो त्यो मिलनबिन्दु पनि राजावाद नै थियो । अहिले पनि कमलथापाहरूको राष्ट्रवाद ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ को सोच र शैलीको राजावादकै अव्यक्त व्याख्या या बुझाइकै अभिव्यक्ति हो ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक शक्तिले २०६२-६३ मा एउटा आशा र सम्भावना पस्केका थिए । नेपाल नूतन र विलक्षण बाटामा, रक्तहीन क्रान्तिबाट रूपान्तरणको नयाँ दिशामा अगाडि बढीरहेको सङ्केत देखिएको थियो । तर कति चाँडो नेताहरूले जनताको मोहभङ्ग हुने स्थिति उत्पन्न गरिदिए अथवा नेताहरूको यथार्थ नै यही थियो । उनीहरू रूपान्तरणभन्दा पनि यथास्थिति देश र जनताको हितभन्दा पनि आˆना स्वार्थ र सुखसयलप्रति प्रतिबद्ध रहेको प्रतीत हुन्छ । जसले गर्दा सानो भएर पनि सुन्दर, शान्त, विशाल नेपालको सपना भताभुङ्ग हुनथालेको छ ।
देश बन्न गाह्रो छैन । इमान्दारी, दूरदर्शिता र इच्छाशक्ति भए पुग्छ । मलेसियाबट छुट्टँिदा सिंगापुर कति बेहाल अवस्थामा थियो । ली क्वान युले एउटा नयाँ दृष्टिदिशा दिए । सिंगापुर आज विश्वकै उन्नत भएको छ । बीसौं शताब्दीको प्रारम्भमा समेत चीनको अवस्था के थियो ? ३५ वर्षसम्म जापानको गुलामीमा बसेको दक्षिण कोरिया कसरी उन्नत राष्ट्र बन्नपुग्यो ? सन् १९८८ तिर तीन वर्ष कोरिया बसेर र्फकनु भएका पत्रकार -स्वर्गीय) रामचन्द्र गौतमसँग यो पङ्क्तिकारले उतिबेलै दक्षिण कोरियाको प्रगतिरहस्य जान्न खोजेको थियो । उहाँको जवाफ थियो- कोरियालीहरू ड्युटी सकिँदा समेत आधा एक घण्टाको काम बढी रहेछ भने सिद्ध्याएर मात्र जाँदा रहेछन् । ओभरटाइम पनि लिँदैनन् । हामी कहाँ यसको कल्पना सम्म गर्न सकिँदैन । कोरियालीहरूमा एउटा सङ्कल्प थियो । उनीहरू जापानीहरूलाई पक्रन अथवा पछार्न चाहन्थे ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा लि क्यान युले पावर छोडेपछि मन्त्री हुन स्वीकारे हामीकहाँ परराष्ट्र मन्त्रीलाई उपप्रधानमन्त्री नदिँदा रोग नै लाग्दो रहेछ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा जगहँसाइ नै भयो । अझ भनिन्छ पुत्रीले उपप्रधानमन्त्री नपाउँदा पिता असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूको अनुपस्थिति त्यही असन्तुष्टिको सङ्केत हो भनी सञ्चारमाध्यममा आएको छ । यद्यपि यसको खण्डन गरिएको छ । तर उपप्रधानमन्त्री हुने आˆनो आकांक्षाको सङ्केत र सुजाता दिदीले पनि दिइसक्नुभएको छ ।
देशको समस्या के छ, कहाँ छ कोही गम्भीर छैनन् । विचरा नागरिकसमाजका चिन्तकहरूले के गरून् । तिनले भनेको कसले सुन्छ वा टेर्छ र नेताहरू सत्ताको खेलबाहेक अरू कुनै खेल खेल्न मान्दैनन् । भारतको गाली मात्र गर्नेहरूले भारतबाट सिकून् पनि मनमोहन सिंहको सरकारलाई साढे चारवर्षसम वाममोर्चाले सत्ताबाट बाहिर रही समर्थन दिइरह्यो । बाममोर्चाले समर्थन झिके पनि सोनिया गान्धीका कट्टर आलोचक रहेका मुलायम सिंहले पनि बाहिरबाट समर्थन दियो । निर्वाचनका बेला मात्र छुट्टएि । हामी कहाँ सत्तामा नगइकन बाँच्नसक्ने पार्टी र व्यक्ति कहाँ छन् ? कुर्सीको खेलभन्दा देश बनाउने तपस्वीहरू कहाँ छन् ? र देश के हो आत्मसात् गर्न सकेका छन् नेताहरूले ? सामान्य समस्याले असामान्य परिस्थिति किन उत्पन्न भइरहेको छ । पुरानो हिन्दी सिनेमाको एउटा गीत छ, ‘नाव कागजका गहरा है पानी’ । नेताहरू बेइमान छन् या त असमर्थ, असक्षम । रक्सी उही पुरानो छ बोतल नयाँ, लेबल मात्र नयाँ छ, त्यसले परिवर्तित सन्दर्भमा नेताहरूले नयाँ समाजका चाहनाहरूलाई बुझ्न सकेका छैनन् अथवा बुझेर पनि बुझ पचाउँदैछन् । कर्ण शाक्यले ‘खोज’ मा लेखेका छन् पावर भएर पैसा चाहिने नेता र पैसा भएर पावर चाहिने व्यापारीहरू एउटै ड्याङका मूला हुन् । त्यो भन्दा अगाडि उनले लेखे “ऊँट र गधाले कति हदसम्म बोझ बोक्न सक्छन् त्यो कसैलाई थाहा हुनसक्छ । तर हद नाघेपछि एउटा सानो वजनले पनि ऊँटलाई थचक्कै बसाउँछ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ ।” त्यो ऊँटले भारी बोकेको प्रसङ्ग ठ्याक्कै मिल्छ । जनताको धैर्यको सीमा टुट्न थालेको छ ।
प्रश्न यो छैन कि उज्यालो आउँछ कि आउँदैन । उज्यालो नआए त प्रकृतिमा प्रलय हुन्छ, अनर्थ हुन्छ, महाविनाश हुन्छ । उज्यालो घना बादलमा मात्र लुकेको हो । अनिष्टका सङ्केतहरूबाट पहिल्यै पाठ लिने हाम्रो क्षमतालाई सत्तालोलुपताले खाइरहेको छ । यो सरकार जुन परिवेशमा बन्यो, त्यसको जग नै गलत थियो । मुलुकमा दीर्घकालीन हितहरू अल्पकालीन स्वार्थका सामुन्ने गौण हुनुपर्दछ । प्रचण्ड सरकारलाई ट्रयाकमा ल्याउनेभन्दा ‘टि्रक’ ले कजाउने सोच र षडयन्त्रकै कारण आज सहमति बन्न नसकेको हो । को बलियो को कमजोर भन्ने अहिलेको प्रश्न होइन । गिरिजाबाबुको ‘ट्रम्प कार्ड’ र केपी ओलीका राजनीतिक काव्यात्मक गोली पनि अहिलेको आवश्यकता होइनन् । अहिलेको आवश्यकता हो ‘इमान्दार आत्मनिरिक्षण ।
गान्धीले राजनीतिको बारेमा एकपटक भनेका थिए, सर्वोत्तम राजनीति भनेको सही कदम हो । -द वेस्ट पलिटिक्स इज राइट एक्सन) सम्भवतः प्रचण्डले पनि कटवालका बारेमा -प्रक्रियागत) केही चुक गरे तर राष्ट्रपतिले पनि चुक गरे । त्यसपछिको सरकारको जन्म त इतिहासको पानामा अहिंसात्मक कुनै नयाँ कोतपर्वको रूपमा अंकित हुने प्रकृतिको छ । यद्यपि यसमा माधवकुमार नेपाललाई नै अभियुक्त बनाउने दृष्टिकोण पनि अतिरञ्जित र अन्यायपूर्ण छ ।
जहाँसम्म देश बनाउने कुरा छ बनाउने कुरा धेरै र जोडतोडले गरिन्छ । हामीकहाँ काम अत्यन्तै निराशाजनक हुन्छ । तमाम निराशाजनक अवस्थाका अतिरिक्त उज्यालोको मृत्यु भएको छैन । यद्यपि नेपाली शासन व्यवस्थाको अझ पनि सबभन्दा खुबी के छ भने यहाँ दिशाहीनता र अव्यवस्थाकै आधिपत्य छ । जुन पाराले सरकारी कामकाज भइरहेको छ, यसमा कहाँ नयाँ नेपालको झझल्को पाइन्छ ? यद्यपि प्रश्न गर्नु सहज छ उतर कठिन । तैपनि भन्नैपर्छ, सरकारमा ‘टिम वर्क’ छैन, शैलीमा कुनै नवीनता छैन । मिलेर देश बनाउनुको अब विकल्प छैन । माओवादीलाई हुत्याएर त झनै देश चल्नेवाला छैन । अझ भाषाको सवालले मुलुकमा छुट्टै एउटा तूफान ल्याइदिएको छ ।
तर प्रश्नहरू समाधानकै लागि बनेका हुन्छन् भनी बिर्सनु हुन्न । हरेक रोगको औषधि हुन्छ, हरेक रोगीको भने हुननसक्ला- लुइ कुनेले धेरै पहिले यो सूत्र ल्याएका थिए । यो देश अझ सुन्दर, शान्त, विशाल फूलबारी हो । विभिन्न फूलहरूको महìव नजानेर नै विद्वेष, वेचैनी र निराशा यसरी झाँगिएको हो । विविधतालाई पृथकता देख्ने दृष्टिकोण सकारात्मक र सिर्जनात्मकता विहीन एकात्मकतावादी दृष्टिकोणकै प्रतिफल हो । चस्मा फेर्नु जरुरी छ, सोच बदल्नु जरुरी छ । तेरो मेरोको भावना बदल्नु जरुरी छ । धेरै कुरा बिगि्रसके, धेरै अझ बाँकी नै छन् । हामी कहिल्यै परतन्त्र भएनौं, कसैको उपनिवेश भएनौं । तर एक हजार वर्षको पददलित भारतले आठसय वर्ष जति इस्लामी आक्रमण र आधिपत्य खप्यो र दुई सय वर्ष अंग्रेजहरूको । तर आज प्रगतिपथमा छ । हामी स्वतन्त्र र साहसी भएर पनि यति निरीह र निराश किन छौं ? अवश्य हाम्रा सारथिहरू सही भएनन् । भाषा, भेष, क्षेत्रको प्रश्नमा हामी दूरदर्शी र सहिष्णु हुनुपर्छ । अधिकार चाहनेहरूसमेत संयमित हुनुपर्छ । यो सामान्य बेला होइन असाधारण घडी हो । सत्ताको खेलभन्दा निःस्वार्थ भई राष्ट्रसेवाको महायज्ञमा सबै जुट्नुपर्छ । जल, जडीबुटी, पर्यटन, प्रकृति र परिश्रम हाम्रो धन हो । अझ समय छ, प्रचुर सम्भावनाहरूको सबै मिलेर दोहन गर्नुपर्छ, त्यसको फल मिलेर खानुपर्छ । नेपाल अझ सानो छैन । á
गिरीश गिरी, काठमाडौं, भदौ ३०- मुलुक अशान्तिको चपेटामै रुमल्लिएको बेला एउटी नेपाली भिक्षुणीको जीवनीमा आधारित किताब यतिबेला थुप्रै मुलुकमा चर्चित छ। बौद्ध गायिका आनी छोइङ डोल्माको जीवनीमा आधारित पुस्तकले प्रकाशनको डेढ वर्ष नपुग्दै विश्वका आठ फरक भाषामा छापिने मौका पाइसकेको छ।
पहिलो पटक फ्रान्सबाट प्रकाशित ‘मा भ्वइक्स पोर ला लिबर्टी (स्वतन्त्रताका लागि मेरो आवाज)’ लाई थप चारवटा भाषामा छाप्ने अनुमति यसको मूल प्रकाशक ओह एडिसन्सले दिइसकेको छ।
पुस्तक अहिलेसम्म फ्रान्सबाहेक, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोर्चुगल, नेदरल्याण्ड, ब्राजिल र अष्ट्रेलियाबाट प्रकाशन भइसकेको छ। त्यसबाहेक स्लोभेनिया, रुस, बेलायत, पोल्याण्ड र नेपालले पनि यसको प्रकाशनको अनुमति लिइसकेको छ। फरक भाषाका पुस्तकमध्ये केहीमा शीर्षक पनि फरक राखिएका छन्। अंग्रेजीमा छापिएको पुस्तकको शीर्षकको अर्थ ‘स्वतन्त्रताका लागि गीत’ छ भने जर्मनी भाषामा ‘प्रत्येक गीत स्वतन्त्रताका लागि।’
दुई सय ५६ पृष्ठमा फ्रान्सेली भाषाको पुस्तक पहिलोपटक गत वर्ष अप्रिलमा बजारमा आएको थियो। ’फ्रान्समा यो पुस्तक छापिएको महिना दिनमै ३० हजार प्रतिभन्दा बढी बिक्री भएको बताइएको थियो,’ केही दिनअघि मात्र युरोप भ्रमणबाट फर्किएकी ड्रोल्माले नागरिकलाई भनिन्, ‘भर्खरै छापिएको जर्मनीमा यो पुस्तक अहिले ‘बेस्ट सेलर’ को सूचीमा रहेको मलाइ केही बिक्रेताहरूले सुनाए।’
पुस्तक तयार पार्ने बेलामा ड्रोल्मालाई प्रकाशकले ४० हजार युरो दिएका थिए। त्यसमध्ये आधा रकम आमाको स्मृतिमा मृगौला रोग उपचार केन्द्र स्थापनाका निम्ति लगाउने निधो उनले गरेकी थिइन्।
‘त्यसमा करवापतको रकम काटेर १६ लाख रुपैयाँ पोहोरै नेसनल किड्नी सेन्टरलाई बुझाइसकेकी छुँ,’ डोल्मा सोमबार नागरिकलाई भनिन्, ‘अब केही दिनमै मृगौला उपचारका क्षेत्रमा अझ ठूलो उपलब्धीको समाचार सार्वजनिक गर्न लागेकी छुँ।’
जीवनी पुस्तकमा उनले आफ्नी आमाको मृगौला रोगका कारण दयनीय अवस्थाको वर्णन गरेकी छिन्। स्वदेशमै राम्रो उपचारको व्यवस्था नभएका कारण यो रोगका बिरामी र आफन्तले भोग्नु पर्ने सास्तीको उल्लेख गर्दै आमाकै दुःख देखेर व्यवस्थित उपचार केन्द्र खोल्ने निधोमा पुगेको पुस्तकको अन्तिम खण्डमा उनले बताएकी छिन्।
‘त्यसैका आधारमा मलाई थुप्रै मुलुकबाट सहयोगको आश्वासन आइसकेको छ,’ ड्रोल्माले भनिन्, …शनिबार मात्रै अष्ट्रेलियाबाट एक पाठकले सहयोगको वचन दिँदै इमेल पठाएका थिए।’
पुस्तक प्रकाशित भएपछि विदेश जाँदा पहिलेभन्दा निकै अन्तर महशुस गर्न थालेको ड्रोल्माले बताइन्। ‘पहिले कार्यक्रम स्थलमा मात्र प्रशंसक भेटिन्थे,’ उनी भन्छिन्, …आजभोलि सार्वजनिक स्थलहरूमा समेत आफूलाई मन पराउने भेटिन थालेका छन्।’ शान्तिका निम्ति वौद्ध गीत सुनाएर जम्मा पारेको श्रोताभन्दा पाठकहरूको घेराले गर्ने सम्मान अझ गहन महसुस हुने गरेको समेत उनले सुनाइन्। ‘कतिपयले आफ्नो जीवनसँग समेत मेरा भोगाइ जोडेर प्रेरकजस्तो सम्मान गरिदिन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘किताबले मलाई बेग्लै ठाउँ दिन थालेको महसुस भइरहेको छ।’
डोल्माका अनुसार उनले पुस्तकको प्रकाशकबाट पहिलो प्रकाशनयता रोयल्टीबापत थप ९ हजार युरोसमेत पाइसकेकी छिन्। आफ्नो जानकारीमा कुनै पनि नेपाली यति फराकिलो पाठक घेरामा पुगेको यो नै पहिलोपटक भएको आख्यानकार ध्रुवचन्द्र गौतम बताउँछन्। ‘यो ठूलो घटनाको शुभारम्भ हो,’ साझा प्रकाशनका महाप्रवन्धक समेत रहिसकेका गौतम भन्छन्, ‘यसले खोल्ने बाटोले आउने समयका लागि धेरै सम्भावनाको संकेत पनि गर्छ।’
दिप को संसार Kathmandu 54 Years ago
तपाईं वा तपाईंको कोही मान्छे लाई पनि २०१० को डिभी पर्‍यो कि हेर्नुस् !
Posted by dipakt on अक्टूबर 22, 2009
1 Ananda Bidari Nawalpur-11, Makwanpur
2 Anil Awale 3204
3 Anil Lama 3204
4 Anil Thapa 3204
5 Anima Shakya Anamangar-32, Kathmandu
6 Anita K.C. 3204
7 Anita Mainaly Gpo-1, Thimi-16, Lokanthali, Bhaktapur
8 Anup Bikram Shah Butwal-6, Rupandehi
9 Arjun Kumar Katuwal Gpo-1, Hardiya-1, Saptari
10 Arun Kumar Shah Gpo-1, Janakpur-15, Janakpur
11 Ashish Man Buddhacharya 3204 ….बाँकी समाचार हेर्न तलको Read More मा क्लिक गर्नुस्
12 Bachhu Kailash Bista Gpo-1, Shifal-7, Kathmandu
13 Bhesh Raj Shiwakoti 3204
14 Bigyan Shrestha 3204
15 Bimala Acharya 1044
16 Bimala Paudel Agriculture Inputs Company, Nepalgunj-16
17 Bindiya Pradhan Joshi 3204
18 Binod Prasad Basaula 24114
19 Binod Tiwari 3204
20 Birendra Guvaju Shakya Pokhara-1, Kaski
21 Biru Gurung Kathmandu, Laliguras Marg-96
22 Chetan Neupane 24114
23 Chiranjibi Adhikari Tintoliya-13, Biratnagar, Morang
24 Chitra Man Thapa Biratnagar-7, Morang
25 Devashree Bashyal 3204
26 Dhruba Prasad Rimal Mahankal-9, Mandikhatar
27 Dhrur Narayan Yadav Madar-6, Siraha
28 Dil Kumar Tharu Neulapur-9, Bardiya
29 Dinesh Shakya 3204
30 Dipendra Jung Thapa 3204
31 Gopal Krishna Sharma 3204
32 Harka Bahadur Rai 8975 Epc-5036
33 Ishwari Prasad Marahatta 2857
34 Jagannath Wagle Pipalmord-5, Kathmandu
35 Jagantha Subedi 3204
36 Janardan Tiwari 1213
37 Jatin Man Amatya 5141
38 Jyoti Bishwakarma 8975 Epc 814
39 Jyoti Karki Gpo-1, Taksar-1, Syangja
40 Kamala Sapkota (Kandel) Bharatpur-8, Chitwan
41 Khagendra Bhattarai Gherabari-7, Jhapa
42 Kishor Sharma Gpo-1, 9841743720, General Post Office
43 Krishna Prasad Pandey 1213
44 Kumar Bahadur Thapa Chhetri Baglung-2, Dhaulagiri Computer Institute
45 Lalit Chaudhary Anarmani-3, Jhapa
46 Laxman Bhandari New Dhalulagiri Stationary, Rupandhei
47 Laxman Rana 2680
48 Lekh Nath Bhandari Gpo-1, Bharatpur-10, Chitwan
49 Madhu Paudle Bharatpur-4, Chitwan
50 Mandira Nepal 1213
51 Mandira Poudyal 3204
52 Manisha Baral Nepal Sbi Bank, Biratnagar
53 Manohar Kumar Sah Sundarpur-2, Sarlahi
54 Manoj Basnet 3204
55 Manoj Khatiwada 3204
56 Mira Maharjan Kathmandu-12, Teku
57 Nabaraj Thapa 3204
58 Nancy Khadka 3204
59 Nanuka Bhattarai Dillibazar-33, Kathmandu
60 Nilu Neupane Hatkhola-10, Biratnagar, Morang
61 Nirajan Kumar Yadav Bashbari, Kathmandu, H.No-161
62 Pabita Bhandari 3204
63 Pallav Paudel Madhyapur Thimi, Bhaktapur
64 Parmeshwar Chaudhary Ph.N.: 9841567346, G.P.O.
65 Parshu Ram Bhandari 1213
66 Pasang Lama 3204
67 Prakash Khanal 15129, Spc 188
68 Prakash Pokhrel Gpo-1/19090, Kathmandu
69 Prakash Poudel Bageswori-2, Nepalgunj, Banke
70 Purnima Bhattarai 5893
71 Radhika Subedi Parbatipur-1, Chitwan
72 Raju Adhikari Gpo-1, 14323
73 Raju Kc Zerokilometer-5, Pokhara
74 Rakesh Rajbanshi 12540
75 Ram Binehi Yadav 3204
76 Ramchandra Sapkota 24114
77 Rashila Lamsal Hetauda, Makwanpur
78 Rishi Kumar Dhakal 8625
79 Rita Shrestha 3204
80 Ritesh Ghimire 8973 Npc 584
81 Roshani Bhari Pokhara-2/7, Kaski
82 Rudra Luitel Itahari-1, Sunsari
83 Sabitri Basnet 3204
84 Sachet Prasad Karmacharya 3204
85 Sagar Gautam Rajapur-1, Bardiya
86 Sajana Dhakal Ghimire 5178
87 Samjhana Regmi Walling-8, Syangja
88 Sanjay Singh Thapa Ph.N.: 9841668125, G.P.O.
89 Santosh Pandey 3204
90 Sapana Pokharel Amarpath-6, Rupandehi
91 Saroj Kumar Yadav Bagada-2, Mahottari
92 Saroj Maka Crystal International, Bhaktapur
93 Saugat Bhattarai 24233
94 Shailesh Dongol New Road Pako, Kathmandu
95 Shakuntala Subedi Motipur, Bardiya
96 Som Nath Adhikari P.O.B. No.-541, Pokhara
97 Subash Oli 3204
98 Sudarshan Sharma Tutepani-14, Lalitpur
99 Sudhir Khanal 3204
100 Suman Lama 3204
101 Summy Pandey 24114
102 Sundar Mani Poudel Sunu Enterprises, Chitwan
103 Surya Kanta Sapkota Aruchour-4, Syangja
104 Surya Mani Mishra Ratnanagar-01, Chitwan
105 Sushil Thapa 8973 Npc 584
106 Sweety Pradhan Aviwadan Tole-17, Morang, Biratnagar
107 Tara Devi Shakya 3204
108 Tek Bahadur Gurung 8973
109 Tek Bahadur Kami Bhimgithe-3, Dhaulagiri
1 Aditya Prakash Yadav 8973 Npc 584
2 Anupama Sharma 3204
3 Archana Sapkota 3204
4 Arun Kumar Panta 3204
5 Bal Chandra Pokhrel Jhapa
6 Chudamani Niroula Morang
7 Damber K Thapa Magar Butwal
8 Dhan Kumari Shrestha Butwal
9 Dhananjaya Dhakal 3204
10 Durga Kumari Rana Syangja
11 Gyanu Ghale 3204
12 Hari Prasad Rijal 8828
13 Janita Rai 3204
14 Jyoti Dhakal 3204
15 Muktika Tamang Chitwan
16 Nirmala Kumari Pandey 3204
17 Ongdi Sherpa 24114
18 Pawan Kumar Sharma Sunsari
19 Pradip Shrestha 3204
20 Prakash Poudel 3204
21 Pramod Poudel 12719
22 Preem Sharma Pokhara
23 Priyank Katwal 1213
24 Purnakala Bhandari 24114
25 Puspa Pandey 3204
26 Rabi Mainali 3204
27 Rashmi Thakur 20756
28 Sagar Dev Lakhe Kathmandu
28 Saguna Shrestha 2880
29 Samjhana Khadka 3204
30 Sanjib Pant Gorkha
31 Sharada K.C. 6501
32 Shyam Hari K.C. 3204
33 Shyam Kaji Shrestha Kathmandu
34 Srijana Kharel Sindhupalchwok
35 Suman Bahadur Ale 1213
36 Sundar Pra Dhakal Butwal
37 Suraj Bohara 8531
38 Tek Bahadur Karki 3204
39 Ujjwal Kc 6142
40 Umesh Rijal Kathmandu
41 Upendra Sapkota 24114
42 Vijay Karki Chitwan
43 Yuba Raj Pokhrel 3204
Barack Obama celebrates Diwali in White House
Posted by dipakt on अक्टूबर 18, 2009
Posted by dipakt on सितम्बर 11, 2009